Tranga mampalahelo :: Mitantara ny zava-niseho rehetra ny rain’ilay vavitokana maty nokendaina • AoRaha
Hita faty teny andakana-ambohimanga rova, ny tolakandron’ny alarobia 3 avrily lasa teo, ny tovovavy iray, iraika amby roapolo taona. Nisy namono izy, araka ny fizahana nataon’ny mpitsabo sy ny mpitandro filaminana. Ny ampitson’io vao fantatry ny fianakaviany ny zava-nisy. Tonga nijery ny razana ny raim-pianakaviana iray avy eny ambohimangakely, hay ny zanany vavitokana ity namoy ny ainy.
Nitangorona ny olona teny Andakana- Ambohimanga Rova tamin’ny fahitana vatana mangatsiakan’ny tovovavy iray, fotsy fihodirana. Nilaza ho tsy misy mahafantatra azy ny mponina eny an-toerana.
Tsy nahitana taratasy milaza ny mombamomba azy ihany koa teny aminy. Samy nidina nanao ny fizahana ny teo anivon’ny Zandarimaria sy ny mpitsabo. Tsy nahitana diana ratra ankoatra ny teo amin’ny tendany ny vatan’ity tovovavy. Fantatra avy eo fa: “naolana tamin’ny tady ny tendany ka izay no nitarika tamin’ny fahafatesany”.
Niparitaka tao amin’ny tambajotra sosialy “Facebook” ny sary sy ny vaovao mampalahelo. Ny alakamisy maraina vao nisy olona nitonona ho fianakaviany tonga teny amin’ny biraon’ny kaominina Ambohimanga.
Tamin’izany no nahafantarana fa vao erotrerony ity nindaosin’ny fahafa­tesana noho ny sotasotan’ny olon-tsy fantatra ity. Herinandro taty aoriana, nosamborina ny tovolahy iray, sakaizany, ahiana mafy ho namono azy.
Mipetraka eny Ambovokely- Ikianja Ambohimangakely, Randrianjanahary Nathalie Juna, ilay tovovavy mpianatra namoy ny ainy. Vavitokan’ny ray aman-dreniny izy ary manana zokilahy iray. Tamin’ny marainan’ny alarobia 3 avrily lasa teo, no nahitan’ny ray aman-dreniny azy farany. Niala tao an-trano nandeha nianatra toy ny mahazatra izy, tamin’io maraina io.
“Mbola niresaka tsara izahay mianaka. Nanome saran-dalana sy vola azy aho. Mbola niaraka tamin’ny tato an-trano ihany koa izy, nialoha ny nandeha­nany nianatra. Fiteniny foana isaky ny handeha ny hoe lasa aho a!”, hoy Randrianjanahary Evariste, rain’ity tovovavy niharam-boina, mitantara ny fotoana niresahany farany tamin’ny zanany vavy.
Taona fahatelo amina sekoly ambony tsy miankina iray eny Ampasampito Randrianjanahary Nathalie Juna. “Gaga aho fa tsy mbola tonga i Nathalie, ny hariva. Tsy fombany izany. Matetika amin’ny efatra ora hariva izy dia efa tonga ao an-trano. Nanomboka nitady azy izahay. Nanontaniana ny mpiara-monina sy ny fianakaviana ary ny namany”, hoy ihany ny rainy.
Miahiahy ny ray aman-drenin’i Nathalie fa mety ho nandalo vetivety tany am-pianarana izy, tamin’io alarobia io, ka mety ho nandeha tany an-toeran-kafa avy eo. Fantatra mantsy fa nisy nahita teny Ambodivona, tsy lavitry ny fiantsonan’ny taksibe izy, ny antoandro tokony ho tamin’ny 11 ora.
Tamin’io alarobia io ihany, nisy fatim-behivavy iray hita teo amin’ny toerana nisy lavaka sy lobolobo teny Andakana-Ambohimanga Rova. Fotsy fihodirana manao akanjo mainty misy soratra hoe: “No comment I love just Ambondrona” sy pataloha “jean” miloko manga ilay vehivavy. Tsy nahitana taratasy momba azy tany aminy.
Vetivety dia niparitaka tao amin’ny tambajotra sosialy “Facebook” ny vaovao. Noraisin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny kaominina Ambohimanga ny fikarakarana ny razana teo am-piandrasana izay mety ho fianakaviana. Noeritreretina tamin’izany fa hapetraka eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly ny razana, ny ampitso.
“Tsy nieritreritra zava-dratsy aho, ny hariva tsy nodian-janako. Taitra aho, ny maraina, rehefa nahita ny vaovao mampalahelo tao amin’ny “Facebook”. Tsy nino anefa aho hoe sarin’i Nathalie io. Fantatro fotsiny fa manana akanjo mitovy amin’ny hita ao amin’ny sary ny zanako. Nankeny an-toerana avy hatrany izahay”, hoy ny rainy.
Hiakiaka sy ranomaso
“Ankona tanteraka aho. Latsaka ny ranomasoko. Vao nojereko dia fantatro fa i Nathalie ilay hita faty nisy namono. Fantatro ihany izy na dia efa nisy simba kely aza ny razana. Maty ny zanako izay tsy mba nananako maro fa ilay vavitokana”, hoy ity ray mitantara ny zava-nisy tamin’alahelo sy ranomaso.
Teo ihany dia nokarakaraina ny razana sy ny taratasy momba izany ary noentina nihazo ny trano fonenany ny vatana mangatsiakan’ilay tovovavy. Tsy nionona teo kosa ny fianakaviana fa nihazo ny toerana nahitana ny razana sy nanontany olona momba ny zava-nisy marina.
“Nitantara taminay ny olona teny an-toerana fa nisy naheno ny antso vonjy nataon’i Nathalie. Nivoaka ny olona nijery. Nisy lehilahy iray niaraka tamin’i Nathalie teo. Toy ny tsy maninona ilay lehilahy raha efa mitsirara eo amin’ny tany kosa i Nathalie. Nambaran’io lehilahy io tamin’izany fa nisy namono ry zareo. Nilaza ny handeha hampandre ny mpitandro filaminana izy ary nasainy niantso dokotera hijery an’i Nathalie ny olona. Tsy hita popoka avy eo ilay lehilahy”, araka ny fitantaran’ny fianakaviana sasany.
Milaza hatrany ireto mana-manjo fa ny rojo teny am-bozonan’i Nathalie ihany no nanakendana azy. “Nanohitra izy ary mbola afaka niantso vonjy. Voaroba ny paoketra sy ny finday niaraka amin’ny peratra teny an-tanany. Nambaran’ny mpitsabo kosa fa tsy voaolana izy”, hoy ihany ny dadan’i Nathalie.
Tampoka ny fahafatesana. Tsy nino ny fahalasanan-janany tampoka, ireo ray aman-dreniny sy ny anadahiny, ny havana rehetra sy ny namana aman-tsakaiza ary ny mpiara-monina. Maty tsy niala-nenina akory ilay vavitokana.
Tso-piainana Randrianjanahary Nathalie Juna, fony fahavelony. Tsy dia sariaka izy nefa kosa mahay mifandray aman’olona. Eo am-pikasana hiatrika fizarana asa mifandray amin’ny fianarana ataony izy no izao nindaosin’ny fahafatesana izao.
Fisamborana teny Ambohidratrimo
Tsy nitsahatra ny fanadihadiana sy ny fikarohana nataon’ny zandarimaria teny Ambohimanga manoloana an’ity vono olona ity. Nohenoina ny fianakaviana sy ny olona akaiky an’i Nathalie. Nisy ihany koa ny fitsirihana ny finday nampiasainy. Nivoaka tamin’izany ny tovolahy iray sakaizany. Fantatra ny mombamomba azy rehetra. Nandeha tany amin’ny trano fonenan’io tovolahy io ny mpitandro filaminana, saingy tsy nahatratra azy tao. Noraisim-potsiny teny amin’ny toeram-piasany teny Ambohidratrimo kosa izy, ny alakamisy 11 avrily. “Niaiky ho namono an’io tovovavy sakaizany io ilay tovolahy”, hoy ny mpanao famotorana.
Fandrobana fiara mpitondra vola :: Basy poleta iray tavela tao anaty kamiao voatafika